, raha nampahafantatra ny fandalovan’ny mpaminany vahiny iray eo anivon’ny fiangonana izay tarihiny eto Madagasikara. Efa ela izahay no nanaraka ity mpaminany ity ary nahita fa saika marina daholo izay nolazainy. Ny andro maromaro handalovany eto dia hisy ny fiheverana ho fihaonany amin’ny mpitondra ary ny anjaran’ny vahoaka kosa dia ny sabotsy izao eny By pass. Ny fisian’ny olona mahomby eo amin’ny fiainana koa dia tsy midika fa tsy misy ny tsy mahomby, hoy izy, raha nanazava ny fahitany ny aretin’ny firenena ankehitriny. Miombon-kevitra amin’ny filoham-pirenena aho fa fotoana hiovan’ity firenena ity izao. Tsy mora ny manarina an’ity Madagasikara ity. Mangataka ny fitondram-panjakana aho mba hamela ny fiangonana sy fikambanana rehetra hanao ny asany fa ireo no hahavita hanova ny olona isaky ny fokontany. Mila harenina ny toe-tsaina Malagasy, hoy hatrany ity mpitondra fivavahana ity.
J. Mirija/ Tsirinasolo